समाधान गरिएको: माइक्रोसफ्ट एक्सेलले प्रतिक्रिया दिदैन् / काम गर्ने विन्डोज १० लाई रोक्दैन - विन्डोज १०
समाधान गरिएको: माइक्रोसफ्ट एक्सेलले प्रतिक्रिया दिदैन् / काम गर्ने विन्डोज १० लाई रोक्दैन
धेरै प्रयोगकर्ताहरू रिपोर्ट गर्छन् एक्सेल प्रतिक्रिया छैन जब बचत गर्ने वा एक्सेलले जवाफ दिइरहेको छैन भने कसरी म आफ्नो कार्यहरू बचत गर्न सक्छु? यो अधिकतम स्थापना गरिएको add-in को कारणले हुन्छ कि एक्सेलको साथ हस्तक्षेप वा एक्सेलसँग विवादास्पद अर्को प्रोग्राम
सामग्रीहरू देखाउनु १ एक्सेल प्रतिक्रिया छैन, ह्याs्ग, स्थिर वा काम रोक्छ ठीक गर्नुहोस् १.१ सेफ मोडमा एक्सेल सुरू गर्नुहोस् १.२ एक्सेल एड-इन्स हटाउनुहोस् १.3 Microsoft Office मर्मत गर्नुहोस् १.4 सिर्जना गरिएका नियमहरू हटाउनुहोस् १. खाली वस्तुहरू (आकारहरू) १.6 एक्सेल पाना मर्मत गर्नुहोस्
एक्सेलले काम गर्न छाडेको छ। एक समस्याले कार्यक्रम सही रूपमा काम गर्न रोक्नको कारण। विन्डोजले कार्यक्रम बन्द गर्छ र तपाईंलाई एक समाधान उपलब्ध छ भने सूचित गर्नेछ।
एक्सेल प्रतिक्रिया छैन, ह्याs्ग, स्थिर वा काम रोक्छ ठीक गर्नुहोस्
यदि तपाइँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल पानाको साथ समस्या अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै एक्सेल पानाले प्रतिक्रिया दिदैन, ह्याs्ग, फ्रिज वा काम रोक्दछ जब कार्य पाना बचत गर्दा वा सूत्र थप्ने क्रममा एक्सेल पाना केही समयको लागि 'स्थिर' गर्दछ र सन्देश यहाँ प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन। केहि समाधानहरू जुन तपाईं फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।
अगाडि जानु भन्दा पहिले पहिले एक्सेकले जवाफ दिइरहेको नभएको असुरक्षित एक्सेल फाइलहरू कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने हेरौं।
सरल खुला नयाँ एक्सेल पाना, फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् -> भर्खरको वर्कबुक -> भर्खरको प्रयोग गरिएको एक्सेल कागजातहरू जाँच गर्नुहोस् र असुरक्षित एक्सेल कागजात चयन गर्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस् ' असुरक्षित वर्कबुकहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् 'र त्यसपछि एक्सेल कागजात पुन: प्राप्त नभएसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
'खोल्नुहोस्' संवाद पप अप हुन्छ, ठीक हराएको एक्सेल कागजात खोल्छ र पीसीमा कागजातलाई सुरक्षित ड्राइभमा बचत गर्न 'यस रूपमा बचत गर्नुहोस्' क्लिक गर्नुहोस्।
एक्सेल पानाले प्रतिक्रिया नगर्दै, ह्याs्ग, फ्रिज वा कार्य रोक्ने काम गर्दा रोक्छ तल फिक्स चरणहरू तल।
सेफ मोडमा एक्सेल सुरू गर्नुहोस्
एक्सेलबाट पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस् (यदि त्यहाँ कुनै पाना खोलियो भने)।
विन्डोज + आर टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् excel -safe त्यसपछि प्रेस गर्नुहोस् प्रविष्ट गर्नुहोस् '।
जाँच गर्नुहोस् कि यदि एक्सेल सुरक्षित मोडको साथ खुल्छ, र कुनै समस्या उत्पन्न गर्दैन भने, यो सम्भावना छ कि एड-इन्स वा अन्य सफ्टवेयर स्थापना भएको छ जुन सफ्टवेयरमा हस्तक्षेप गर्दैछ। तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् -ड-इनहरू हटाउनका लागि जुन सायद तपाईको लागि समस्या समाधान गर्दछ।
एक्सेल एड-इन्स हटाउनुहोस्
चयन गर्नुहोस् फाईल > विकल्प> एड-इन्स ।
चयन गर्नुहोस् एक्सेल एड इन्स ' मा प्रबन्ध गर्नुहोस् ड्रप-डाउन मेनू, त्यसपछि चयन गर्नुहोस् जानुहोस् ... ।
यदि कुनै आईटमहरू जाँच गरियो भने, तिनीहरूलाई अनचेक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि ' ठिक छ “। यसले एड-इन्स अक्षम गर्दछ जुन फ्रिजिंगको कारण हुन सक्छ।
एक्सेल बन्द गर्नुहोस्, त्यसपछि सामान्य रूपमा यसलाई सुरूवात गर्नुहोस् कि त्यो चाल भयो कि भनेर हेर्नका लागि।
यदि अझै समस्या फेरि समाधान भएन भने फाइल> विकल्पहरू> ड्रप डाउनबाट एड-इनहरू चयन गर्नुहोस् ' COM एड-इन्स ',' कार्यहरू “, र“ XML विस्तार प्याक 'र ती छनौटहरूमा आईटमहरू असक्षम पार्ने हो भने चाल गर्नुहोस्।
यदि तपाईको समस्या सुल्झाइएन भने तपाईले एक्सेल सुरक्षित मोडमा सुरु गरेपछि, यो सूचीको अर्को आईटममा जारी राख्नुहोस्।
Microsoft Office मर्मत गर्नुहोस्
माईक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज मर्मत गर्दै, प्राय: सबै समस्याहरू एक्सेल, शब्द, आउटलुकका साथ यसलाई गर्नका लागि हटाउनुहोस्,
जानुहोस् 'कन्ट्रोल प्यानल> कार्यक्रमहरू' स्थापना रद्द गर्नुहोस् '।
प्रोग्राम सूची जाँच गर्नुहोस् र माईक्रोसफ्ट अफिसको लागि हेर्नुहोस्। यसलाई दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र 'परिवर्तन' छनौट गर्नुहोस्।
'द्रुत मरम्मत> मर्मत गर्नुहोस्' छनौट गर्नुहोस्।
मर्मत प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कुर्नुहोस् र एक्सेल पुन: खोल्नुहोस्। यदि समस्या अझै पनी देखा पर्दछ भने, 'अनलाइन मर्मत गर्नुहोस्' सुविधा छनौट गर्नुहोस्।
सिर्जना गरिएका नियमहरू हटाउनुहोस्
यदि तपाईंसँग एकल स्प्रिडशिट मात्र समस्या छ भने, नयाँ नयाँ एक्सेल शीटहरू राम्रोसँग काम गर्दैछन्, तर पुरानो बचत गरिएको एक्सेल पानाको प्रतिलिपि समस्या पैदा गर्‍यो, प्रतिक्रिया दिदैन, तपाईंले तल समाधान प्रयास गर्नुपर्छ।
समस्याग्रस्त स्प्रिडशिट फाइल खोल्नुहोस्।
'फाईल> यस रूपमा बचत गर्नुहोस्' मा जानुहोस् र फरक नाममा टाइप गर्नुहोस्। (हामीसँग पानाको ब्याकअप छ, यदि केही गलत भएमा)।
अब जानुहोस् 'होम> ससर्त स्वरूपण> सफा नियमहरू> सम्पूर्ण पानाबाट नियमहरू खाली गर्नुहोस् ’। यदि स्प्रिडशिटसँग धेरै ट्याबहरू छन् भने, तपाईंले नियमहरू खाली गर्नको लागि चरण दोहोर्याउनु पर्छ।
र कागजात बचत गर्न Ctrl + S थिच्नुहोस्, अब पाना ठीकसँग काम गरिरहेको जाँच गर्नुहोस्।
खाली वस्तुहरू (आकारहरू)
माइक्रोसफ्ट फोरममा सुझाव गरीएको एक प्रयोगकर्ताले स्पष्ट वस्तुहरूले एक्सेललाई जवाफ नदिने समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, मुद्दा स्थिर गर्दछ। तपाईं यो बाट गर्न सक्नुहुन्छ
CTRL समात्नुहोस् र ' G 'लाई माथि ल्याउन' जाऊ त्यहाँ ”बाकस
चयन गर्नुहोस् ' विशेष ... ' टांक।
बाट ' विशेषमा जानुहोस् 'स्क्रीन, चयन' वस्तुहरू ', त्यसपछि चयन गर्नुहोस्' ठिक छ '।
“थिच्नुहोस् मेटाउन '।
एक्सेल पाना मर्मत गर्नुहोस्
यदि एकल एक्सेल पानाले मात्र समस्या निम्त्याउँछ भने, त्यसपछि पाना आफै दूषित हुने सम्भावना हुन्छ। एक्सेल मर्मत उपकरण प्रयोग गरेर पाना मर्मत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
'फाईल> खोल्नुहोस्' मा जानुहोस्।
'खोल्नुहोस्' बटनमा सानो ड्रपडाउन एर्रोमा क्लिक गर्नुहोस्।
छनौट गर्नुहोस् 'खोल्नुहोस् र मर्मत गर्नुहोस् ...' र त्यसपछि छान्नुहोस् 'मर्मत गर्नुहोस्' विकल्प पाना रिकभर गर्नका लागि।
के यी समाधानहरूले असुरक्षित एक्सेल फाइलहरू पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्‍यो जब एक्सेलले प्रतिक्रिया गरिरहेको छैन, एक्सेल पानाको साथ फरक समस्या हल गर्नुहोस्? हामीलाई तल टिप्पणी मा थाहा दिनुहोस्, पनि पढ्नुहोस् समाधान गरिएको: विन्डोज १० स्क्यानि and र मर्मत ड्राईभ सी १०० मा रोकियो
क्रोम विन्डोज १० ले काम गरिरहेको छैन
क्रोम विन्डोज १० मा कुनै आवाज छैन
महत्वपूर्ण त्रुटि सुरू मेनू isn t काम गर्दै
शब्दमा उत्तम क्रसव फन्टहरू
विन्डोज १० प्रिन्टर त्रुटि स्थिति
गुगल क्रोम विन्डोज working मा काम गर्न रोकियो